निक भुजिसिकका केही भनाइहरू – ताजा समाचार
निक भुजिसिकका केही भनाइहरू
यदि तपाईं चमत्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने एक बन्नुहोस् ।
तपाईले यो सोच्नु गलत हो कि तपाईं पर्याप्त राम्रो हुनुहुन्न र तपाई कुनै कुराको लायक हुनुहुन्न ।
हाम्रो जीवनमा भएका चुनौतीहरू हाम्रो विश्वासलाई बलियो पार्नका लागि छन् ।
यदि तपाईं अघि बढिरहनुभयो भने केही घाउहरू चाँडै निको हुन्छन् ।
जोखिम जीवनको भाग मात्र होइन, यो जीवन हो ।
डर जीवनको सबैभन्दा ठूलो अशक्तता हो ।
स्वर्ग जानभन्दा पनि एक कुरा राम्रो छ र त्यो भनेको कम्तीमा अर्को एक व्यक्तिलाई आफूसँग जान प्रोत्साहित गर्नु हो ।
तपाईसँग अगाडि के हुन्छ त्यसको संकेत नहुन सक्छ, तर जीवनले तपाईंमाथि काम गर्न दिनुभन्दा जीवनमा कार्य गर्नु उत्तम हो ।
समायोजनहरू बाटोमा आवश्यक हुन्छ किनकि जीवन सधैं रमाइलो हुँदैन तर यो बाँच्न लायक छ ।
तपाईको अभाव अनुसार तपाई बाँच्नु हुँदैन ।
जीवनमा दुई किसिमका जोखिमहरू छन्, प्रयास गर्ने खतरा र प्रयास नगर्नुको खतरा ।
जबसम्म तपाईं सजग हुनुहुन्छ र आफ्ना भावनाहरूको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, नकारात्मक विचारहरूले सकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ ।
मैले आशा गुमाउनुभन्दा अघि म कहिल्यै अपांग भइनँ ।
चरित्र सहज र शान्त रूपमा विकसित गर्न सकिँदैन । केवल परीक्षण र कष्टको अनुभवद्वारा आत्मालाई सुदृढ पार्न, महत्वाकांक्षा प्रेरणा दिन सकिन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मित्रहरू, यदि हाम्रो जीवनमा केही गल्ती भयो वा हामी केही कठिनाइहरूको सामना गर्दछौं भने हामी छक्क पर्दछौं किन यो हामीसँग हुन्छ? हामी हाम्रो भाग्यलाई दोष दिन्छौं। हामी समस्याहरूको सामना बिना हार स्वीकार गर्दछौं। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ भने, तब यो पोष्ट जीवन को लागी तपाइँको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनेछ।
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि यदि तपाईं हात वा खुट्टा छैन भने? के तपाईं हात र खुट्टा बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ? यस्तो सोचाइ डरलाग्दो पनि छ। तर अस्ट्रेलियाका निवासी निक भ्युजिकसँग जन्मपछि पनि त्यस्तै भयो। आउनुहोस् निकको संघर्षपूर्ण जीवनको कथा जानौं।
प्रेरणादायक जीवन कहानी
निकको जन्म December डिसेम्बर १ १९८२ मा मेलबोर्न अष्ट्रेलियामा भएको थियो। टेट्रा अमेलिया रोगका कारण, उनको हात र खुट्टा गर्भमा विकास हुन सक्दैन।
डाक्टरहरूले धेरै प्रयास गरे पनि, यो समस्या हटाउन सकिएन।
निकले बच्चाको रूपमा धेरै मानसिक र शारीरिक रूपमा धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो। शुरुमा उनका आमाबुबाले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु परेको थियो, हात र खुट्टाको अभावले उनीहरूलाई सामान्य विद्यालयमा जान अनुमति थिएन।उनी आफ्नो अवस्थाबाट यति निराश थिए कि १० वर्षको उमेरमा उनले आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरे।
निक अरू बच्चाहरू भन्दा धेरै फरक थिए। निकले उसको जीवनको उद्देश्य के हो भनेर सोच्न थाले, तर एउटा लेख पढेपछि जीवनप्रति उसको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। यो लेख “उसको विकलांगता र उसको साथ विजयको साथ एक अशक्त व्यक्तिको युद्ध” मा थियो।
त्यसो भए निकले आफ्नो अभावलाई आफ्नो विशेषता बनाउने निर्णय गरे र १७ वर्षको उमेरमा उनले लाइफ विथ लिम्ब संस्था स्थापना गरे। निकको बोल्ने क्षमता र जीवनलाई ठीकसँग बुझ्ने सिद्धान्तले धेरै मानिसहरूलाई असर गर्न थाल्यो।
उनी २० वर्षको उमेरमा मोटिभिएसन वक्ता बने। उनी ६० देशमा बसाई सरे र लाखौं मानिसहरूलाई जीवनमा शोक लड्नका लागि प्रेरित गरे।निक प्रभावशाली प्रवक्ताको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा परिचित भए। निकका विश्वव्यापी रूपमा लाखौं अनुयायीहरू छन्।
उनले क्विन्सल्याण्डको ‘ ग्रिफिथ युनिभर्सिटी ‘ बाट लेखा र वित्तीय योजनामा ​​स्नातक डिग्री हासिल गरे।निक १ 17 वर्षको हुँदा उनले आफ्नो चर्च समूहलाई भाषण दिन थाले।वक्ताका रूपमा उनले मुख्यतया स्कूली केटाकेटीहरू, युवा वयस्कहरू र काम गर्ने पेशागतहरूलाई सम्बोधन गर्छन्। किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि येशू उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
२००८ मा, निकले एक अमेरिकी टिभी कार्यक्रम २०/२० को लागि अन्तर्वार्ता दिए। सन् २००० मा, निकले ‘ द बटरफ्लाय सर्कस ‘ छोटो फिल्ममा अभिनय गर्यो। यो फिल्मले धेरै पुरस्कारहरू जित्यो।
२०१० मा, निकले ” जीवन बिना सीमाहरू: एक हास्यास्पद जीवनको लागि प्रेरणा ” नामक पुस्तक लेखेका थिए। अहिलेसम्म उनी ७ वटा पुस्तक लेखेका छन्।
पुरस्कार र उपलब्धि पुरस्कार र उपलब्धिहरु
निकको दृढ संकल्प र साहसले विश्वलाई प्रभाव पारे, र उनी १९९० मा ” अष्ट्रेलिया यंग सिटीजन अवार्ड ” बाट सम्मानित भए।
उनी २००५ मा “युवा अस्ट्रेलियाका वर्ष” का दावेदार थिए। उनले “बटरफ्लाय सर्कस” छोटो फिल्मको लागि ‘सर्वश्रेष्ठ अभिनेतामा छोटो फिल्म पुरस्कार’ प्राप्त गरे।
निजी जीवन व्यक्तिगत जीवन निकले २०१२ मा काना मियाहारासँग विवाह गरे र उनको एउटा छोरा छ।
यदि तपाईंलाई नेक वुजिकिकको प्रेरणादायक कथा मनपर्‍यो भने, कृपया कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्। पढ्नको लागी धन्यवाद